तपाईंको आजको राशिफल – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठरोचकतपाईंको आजको राशिफल
भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । बाध्यताले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ । अस्वस्थताका बाबजुद कामको दायित्व बढ्नेछ । हातमा आएका केही अवसर गुम्न सक्छन । चोटपटक वा हाड–जोर्नीमा समस्या आउने देखिएकाले सवारीसाधन वा हातहतियार उपयोग गर्दा सावधानी अपनाउनुहोला ।
अरुबाट उच्च अपेक्षा राख्नु हुँदैन, बरु तपाईको कामको क्षमतामा विश्वास गर्नु राम्रो हुन्छ । धेरै पटक भावनाहरूमा मन बस्छन् र लाभप्रद नै रहन्छ । व्यावहारिक तरिकामा जीवनसँग सम्बन्धित प्रत्येक गतिविधिलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् ।
समयमा काम पूरा नहुनाले अवसर गुम्न सक्छ । जिम्मेवारी भने बढिरहनेछन् । जीवनसाथीको समस्याले चिन्ता बढाउन सक्छ । स्थायी सम्पत्तिका विषयमा केही विवाद आउन सक्छ । अन्धविश्वासको भरमा काम गर्नाले दुःख पाइनेछ । धार्मिक काममा बाधा सृजना हुन सक्छ सजक रहनुहोला । रमाइलो भ्रमण होला ।
दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन सकिनेछ । गरिएका कामको राम्रै मूल्यांकन हुनेछ । भौतिक साधनसमेत जुट्नाले प्रसन्नता मिल्नेछ । रोकिएका काम बन्नुका साथै आयआर्जनका स्रोतसमेत बढ्नेछन् । कृषि, पशुधनबाट पनि यथेष्ट लाभ मिल्नेछ । आफ्नै कमजोरीले परिवारजनमा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ ।
तपाईंको धार्मिक र आध्यात्मिक कार्यहरूमाथिको विश्वास बढ्नेछ । तपाईंको दृष्टिकोणमा पनि आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तनहरू हुनेछन् ।आफन्तसँग चलिरहेको बहसलाई सुल्झाउने प्रयास गर्नुहोस्, निश्चित रूपमा तपाई सफल हुनुहुनेछ ।
गृहका वरिष्ठ सदस्यहरूको सहयोग र मार्गदर्शनमा उचित व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरिनेछ।परिवारका सबै सदस्यहरू उचित मेलमिलापमा रहनेछन्।स्वास्थ्य- प्रकाश र मौसमी समस्याहरू रहनेछन्।
एउटा अप्रिय घटनाले तपाईंको दिमागमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। ध्यानमा केहि समय खर्च गर्नुहोस्, यसले सकारात्मकता ल्याउनेछ ।
विद्यार्थी र युवा व्यर्थ गतिविधिहरुमा अध्ययन गरेर आफ्नो क्यारियरसंग लापरवाह हुनु हुँदैन । विशेष गरी महिला र बुजुर्गहरु आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्छन् । आज द्रव्यप्राप्तिको योग रहेको छ ।
आर्थिक लाभनिकाल्नको लागी प्रयास गर्नुहोस र सफल पनि हुनुहुनेछ । तपाईं आफ्ना साथीहरू र आफन्तहरूसित मिठो सम्बन्ध राख्नुहुनेछ ।
व्यापार गतिविधिहरुमा ढिलो हुनेछ । आज कार्य र गुणस्तर अझै सुधार गर्न आवश्यक छ यद्यपि कर्मचारीहरूको पूर्ण समर्थन रहनेछ । सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो कागजात धेरै उच्च राख्नुपर्नेछ।
कामसँग सम्बन्धित बढ्दो तनाव केवल हाम्रो लापरवाहीको कारणले हुन सक्छ । पार्टनरको बाध्यताको फाइदा उठाउँदा सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। स्वास्थ्य: आँखा र नाक सम्बन्धित रोग असुविधा हुन सक्छ।
आटेको काममा सफलता मिल्नेछ । तपाइको प्रतिभाको उच्च मूल्यांकन हुनेछ । नोकरीमा पदोन्नति र राजनीतिमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा हुने समय छ । समयमा निर्णय लिन नसक्ता हातमा आएको अवसर गुम्न सक्छ । मान–सम्मानमा चोट पुग्ने सम्भावना छ, सचेत रहनुहोला । सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ ।
के बाटोमा भेटेको पैसाले हानि गर्छ ? हिन्दूधर्मको दर्शन अनुसार जान्नुहोस् यी कुरा
बासी भात खाँदा हुन्छ यस्ता फाइदा !
बिबिसीको प्रभावशाली महिलाको सूचीमा १८ वर्षीया सपना रोका मगर